रहेनन् बाजपेयी : उनी भन्थे-'में जी भर कर जिया, मैं मन से मरूँ, लौटकर आऊँगा, कूच से क्यों डरूँ?' - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचाररहेनन् बाजपेयी : उनी भन्थे-‘में जी भर कर जिया, मैं मन से मरूँ, लौटकर आऊँगा, कूच से क्यों डरूँ?’
मौत की उम्र क्या? दो पल भी नहीं
यसो भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी अब रहेनन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको थियो। दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्सले वाजपेयीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको बताएको थियो। उनी 93 वर्ष पुगेका थिए। उनी धेरै समयदेखि विरामी थिए। सास फेर्न गाह्रो हुने अनि किडनीमा संक्रमण भएकोले उनलाई 11 जूनकै दिन एम्समा भर्ना गरिएको थियो।
15 अगस्‍तको दिन उनको स्वास्थ्य बिग्रियो। त्यसपछि लाइफ सपोर्ट सिस्टममा राखिएको थियो।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुधबार बेलुका वाजपेयीलाई भेट्नका लागि अस्पताल गएका थिए। भारतीय जनता पार्टी, भाजपाका संस्थापक मध्येका एक वाजपेयी तीनपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्नबाट सम्मानित भएका थिए। वाजपेयी ९ पटक लोकसभा सांसद भए। उनी भारतको दोस्रो लोकसभादेखि १३ औँ लोकसभासम्म गरी ९ पटक सांसद बनेका हुन्।
उनी सन् १९६२ देखि १९६७ तथा सन् १९८६ मा राज्यसभा सदस्य पनि रहे। वाजपेयी सन् १९९६ को मे १६ मा पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर लोकसभामा बहुमत साबित गर्न नसकेका कारण मे ३१ म उनले प्रधानमन्त्री पद छोड्न परेको थियो।
त्यसपछि सन् १९९८ सम्म उनी लोकसभामा विपक्षी नेता रहे। सन् १९९८ को आम चुनाउमा गठबन्धन बनाएर चुनाउ लडेका उनले बहुमत ल्याए र प्रधानमन्त्री बने। तर एआइएडिएमकेले गठबन्धनबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि वाजपेयी सरकार ढल्यो र फेरि आम चुनाउ भयो।
सन् १९९९ मा भएको चुनाउमा वाजपेयीको नेतृत्वमा भाजपासहितका पार्टी राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनको साझा घोषणापत्रमा चुनाउ लडे। चुनाउमा गठबन्धनले बहुमत पायो र बाजपेयी फेरि प्रधानमन्त्री बने।
आजभन्दा ४५ वर्षअघि अटलले पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढेको विरोधमा गरेको कामको अहिले पनि याद गरिन्छ।
त्यतिखेर इन्दिरा गान्धीको सरकार थियो र वाजपेयी पेट्रोलको मूल्यवृद्धिको विरोधमा गोरुगाडा बढेर संसद् पुगेका थिए। त्यतिखेर संसदमा ६ हप्तासम्म शीतकालीन सत्र शुरू भएको थियो। पेट्रोलको भाउ बढेपछि वामपन्थी र अन्य विपक्षी दलले इन्दिरा गान्धीको राजीनामा मागेका थिए।
तत्कालीन जनसंघका नेता अटल र दुई अन्य सदस्य गोरुगाडा चढेर संसद् पुगेका थिए। अन्य केही सांसद चाहिँ साइकल चढेर गएका थिए।
अटल र बाँकी विपक्षी नेता देशमा पेट्रोल र डिजेलको कमी भएपछि इन्दिरा गान्धीको बग्गीयात्राको विरोध गरिरहेका थिए। त्यतिखेर इन्दिरा जनतालाई पेट्रोल बचाउने सन्देश दिनका लागि बग्गीयात्रा गर्दै थिइन्।
उत्तर प्रदेशको आगरा जनपदको प्राचीन स्थान बटेश्र्वरमा २५ डिसेम्बर, १९२४ का दिन ब्रह्ममुहूर्त्तमा उनको जन्म भएको थियो। बी.ए.को शिक्षा ग्वालियरको विक्टोरिया कलेज (वर्तमानमा लक्ष्मीबाई कलेज) मा भयो। छात्र जीवनदेखि उनी राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घका स्वयंसेवक बने र तबदेखि राष्टीय स्तरको वाद-विवाद प्रतियोगिताहरूमा भाग लिनथाले।
कानपुरको डी.ए.वी. कलेजबाट राजनीति शास्त्रमा प्रथम श्रेणीमा एम.ए. को परीक्षा उत्तीर्ण गरे। फेरि एल.एल.बी. को पढाई शुरू गरे तर त्यसलाई बीचमा छोडी सङ्घ कार्यमा लागे। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी र पं. दीनदयाल उपाध्यायको निर्देशनमा राजनीतिको पाठ पढे। सम्पादकको रूपमा पाञ्चजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश र वीर अर्जुनको कार्यभार सम्हाले।
उनी भारतीय जन सङ्घको स्थापना गर्नेहरूमा एक जना हुन् र १९६८ देखि १९७३ सम्म उनी त्यसको अध्यक्ष पनि रहे। १९५५ मा पहिलो पल्ट लोक सभा चुनाउ लडे, सफलता पाएनन् तर, १९५७ मा बलरामपुर (जिल्ला गोण्डा, उत्तर प्रदेश)बाट जनसङ्घको प्रत्याशीका रूपमा विजयी भएर लोक सभामा पुगे। १९५७ देखि १९७७ सम्म (जनता पार्टीको स्थापनासम्म) जनसङ्घका संसदीय दलका नेता रहे।
१९६८ देखि १९७३ सम्मउनी भारतीय जनसङ्घका राष्टीय अध्यक्ष पदमा आसीन रहे। मोरारजी देसाईको सरकारमा उनी १९७७ देखि १९७९ सम्म विदेश मन्त्री रहे र विदेशमा भारतको छवि राम्रो बनाए।
१९८० मा जनता पार्टीदेखि असन्तुष्ट भएर उनले जनता पार्टी छोडेर भारतीय जनता पार्टीको स्थापनामा सहयोग गरे। ६ अप्रिल, १९८० मा बनेको भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष पदको दायित्व वाजपेयीलाई सुम्पियो। दुईपल्ट राज्यसभाका लागि पनि निर्वाचित भए। लोकतन्त्रका सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयीले १९९७ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको बागडोर सम्हाले। १९ अप्रिल, १९९८ मा पुनः प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए र उनको नेतृत्वमा १३ दलहरूको गठबन्धन सरकार मार्फत् पाँच वर्षमा देशले प्रगतिका अनेक आयाम छोयो।
सन २००४ को लोकसभा चुनाउमा भाजपाका नेतृत्वमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एण्डीए)ले वाजपेयीका नेतृत्वमा चुनाउ लड्यो र भारत उदय (इण्डिया साइनिङ)को नारा दियो। यस चुनाउमा कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत प्राप्त भएन। यस्तो स्थितिमा वामपन्थी दलहरूको समर्थन लिएर काङ्ग्रेसले भारतको केन्द्रीय सरकारमा कायम हुनमा सफलता प्राप्त गर्‍यो र भाजपा विपक्षमा बस्न बाध्य भयो। अहिले उनले राजनीतिबाट सन्यास लिसकेका छन्।
कविका रूपमा अटल
अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिज्ञ हुनका साथ-साथ एक कवि पनि हुन्। मेरी इक्यावन कविताएं वाजपेयीको प्रसिद्ध काव्यसङ्ग्रह हो। अटल बिहारी वाजपेयीको काव्य रचनाशीलता एवं रसास्वाद पिताबाट प्राप्त भएको हो। उनका पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासतमा त्यस समयका मानिएका कवि थिए।
उनी ब्रजभाषा र खडी बोलीमा काव्य रचना गर्थे। पारिवारिक वातावरण साहित्यिक एवं काव्यमय हुनको कारण उनी सफल कवि बनेका हुन्। उनको सर्व प्रथम कविता ताजमहल थियो। कवि हृदय कहिल्यै पनि कविताबाट वञ्चित हुनसक्तैन। राजनीतिको साथ-साथ समष्टि एवं राष्ट्रप्रति उनको वैयक्तिक संवेदनशीलता प्रकट हुन्छ।
उनको सङ्घर्षमय जीवन, परिवर्तनशील परिस्थितिहरू, राष्ट्रव्यापी आन्दोलन, जेलवास सबै परिस्थितिको प्रभाव एवं अनुभूतिले काव्यमा अभिव्यक्ति पाएकोछ।